ENUGWU: ỤMỤ NWANYỊ NDI AHỊ NA-ACHỊLIRI UGWUANYỊ AKA ELU. – hoo!haa!!
Ụnyahụ bụ Fraidee ka ụmụ nwanyị ndi na-azụ ahịa n’Enugwu, nuputara n’igwe nakwa n’ime ọñụ n’obi gọọmenti Enugwu, were n’ekwu hoohaa, n’ọbụ aka na-achị steeti Enugwu ugbu a bụ Ọnọrabụl Ifeanyị Ugwuanyị ga-aga n’ihu n’afọ puku abụọ na iri na itolu, na-ichị yabụ steeti Enugwu. N’okwu ha, nke a bụ site ka yabụ nwa-amadị si agba mbọ ịhụ na udo na-achị na yabụ steeti tinyekwara inyere ha bụ ndi ahịa aka ịhụ na ahịa ha na-aga n’ihu.
Ndi ahịa a, bụ ndi kọwapụtara Ugwuanyị dịka onye ọchịchị kachaa bụrụ enyi ndi ahịa kamgbe otu puku afọ na iri itolu na itolu, kwuru na onwebeghị mgbe ihe jiri gara ha sịrịrị werere ka o si agara ha ugbu a.
Ha sịrị na ọ bụ naani Ugwuanyị bụ aka ọchịchị Enugwu izizi chetara ndi ahịa. Ha kwuru sị, maka ihi nke a, na ha na-akwado ka ọ chịrị gaba n’ihu, ọbụladị mgbe aga-eme ntụlu aka nke afọ na-abịa abịa, n’ihi na ọbụ onye mara ka esi elekọta ndi ana-achị achị anya.
Mgbe ọ na-ekwuputa okwu mgbado ụkwụ ha, onye ndu ụmụ nwanyị ndi ahịa ahụ bụ Ọnọrabụl Esta Ede tooro onye ọchịchị ahụ maka atụmatụ nke ọ kpọrọ “Enugu State Traders Empowerment Scheme”, bụ nke o weputara n’afọ puku abụọ na iri na asaa bụkwa nke ejiri nyere ezigbo ndi ahịa aka. Ọ sịrị na ha siri n’soro ‘iwere nke a iwere ego, iwere nke a ego gị alaa’ were nweta puku naira iri ise n’otu n’otu iji nye aka ikwalite ahịa ha. Ọ sị na-emere nke a na-eleghị anya n’agbụrụ, okpukpere maọbụ steeti onye si.
Ọ sịrị na ụmụ nwanyị ritere erere gbara ọkpụrụkpụ n’atụmatụ ahụ. Ọ rụtụrụ aka n’ịhụnanya onye ọchịchị a nwere maka ndi ahịa, were kwue na ihe nwoke a na-eche ụbọchị niile bụ ka ọ ga-esi nyere ndi ahịa aka na steeti Enugwu.
Ụmụ nwanyị ndi ahịa a, nke sitere n’ahịa niile dị na steeti Enugwu jikọrọ aka ọnụ ma kwuo hoohaa, na Ugwuanyị ga-achị nke ugboro abụọ ya.
Ọnọrabụl Ede kwuru na ụmụ nwanyị ndi ahịa Enugwu niile ekwekọrịtala ịrụsi ọrụ ike iji hụ na Ugwuanyị nwetara okwa ọchịchị nke ugboro abụọ ya. Ọ sịrị na nke a bụ maka na Ugwuanyị bụ onye nzọpụta nke sitere n’aka Chineke. Ọ sịrị na ọbụ naanị Ugwuanyị bụ ezigbo onye ọchịchị bụ onye mara ka o sị akpado ndi ahịa nakwa ọhaneze ụmụ ogbenye.
Ọ kwuru na ihe ha ji bịa na nke ya bụ ịbịa kele ya ma gwa ya na ihe ọbụla ọ chọrọ na steeti Enugwu, site n’aka ndi ahịa, na ha ga-enye ya mmaji kwụrụ mmaji. O kwuru na ha bịara ikwu hoohaa, n’ohere adighị maka onye ọzọ ịbata n’obi gọọmenti Enugwu nke ejiri “ụlọ agụ” mara n’afọ puku abụọ na iri na itolu…
Na nzahachi ya, Ugwuanyị kenere ụmụ nwanyị ahụ maka nkwado na ndonye ukwu ha tinyekwara ekpere ha. O kwere ha nkwa na ya ga-aga n’ihu na-ichị n’egwu nke Chineka ma na-akwalitekwa obibi ndụ ndi mmadụ.
Previous Post: DELTA: AHAPỤLA ỤKỌCHUKWU AHỤ ATỌỌRỌ
Next Post: ARỤ NA-EME! PASTỌ EYIPULA NWANYỊ NA-ACHỌ NWA ỌBANTE YA N’IME ỤLỌ ỤKA!!!